Marvel က သူ့ရဲ့ Infinity War Promo Art အသစ်နဲ့ Soul Stone ပိုင်ဆိုင်သူကို Spoil လိုက်ပြီလား - MoviesFan
Marvel က သူ့ရဲ့ Infinity War Promo Art အသစ်နဲ့ Soul Stone ပိုင်ဆိုင်သူကို Spoil လိုက်ပြီလား
ထွက်ရှိဖို့ ၁ လကျော်ကျော်လေးပဲလိုတော့တာဆိုတော့ Marvel က သူ့ရဲ့ Avengers: Infinity War ကို အမှန်အကန် promote စလုပ်နေပါပြီ။ မနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ poster အသစ်ဟာဆိုရင်လည်း Marvel ရဲ့ promotion ခြေလှမ်းတွေထဲက တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ promotion poster အကြောင်း ဘာလို့အထူးတလည်ပြောနေရတာလဲလို့ မေးချင်စရာရှိပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ခေါင်းစဉ်မှာပြောထားသလိုပါပဲ.. အဲဒီ poster မှာ ယခုအချိန်အထိ ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့ Soul Stone ပိုင်ဆိုင်သူနဲ့ဆက်စပ်တယ်လို့ ယူဆလို့ရတဲ့ သဲလွန်စတစ်ခု ပါဝင်လာတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
Marvel Cinematic Universe (MCU) တစ်ခုလုံးက Infinity Stones တွေပေါ်မှာ အခြေခံထားတာပါ။ Infinity Stones က စုစုပေါင်း ၆ လုံးရှိတာဖြစ်ပြီးတော့ လောလောဆယ်အချိန်အထိ ထုတ်ဖော်ပြသပြီးတာ ၅ လုံးပဲရှိပါသေးတယ်။ မနေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Promo Art အသစ်မှာ Infinity Stones ၆ လုံးစလုံးကို ဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီလိုဖော်ပြထားရာမှာ Stones တစ်လုံးချင်းစီကို သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာ ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ဖော်ပြထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့~
Space Stone – အပြာရောင်ဒီကျောက်တုံးလေးကို Avengers: The First Avenger မှာ စတင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာကြောင့် ယခု Promo Art မှာ Captain America နဲ့တွဲဖက်ဖော်ပြထား
Power Stone – ခရမ်းရောင် Power Stone ကို Guardians of the Galaxy မှာ စတင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး Peter Quill/Star-Lord နဲ့ကိုယ်စားပြုဖော်ပြထား
Time Stone – အစိမ်းရောင် Time Stone ကို Doctor Strange ဇာတ်ကားမှာစတင်ဖော်ပြခဲ့ကာ Dr. Stephen Strange နဲ့တွဲဖက်ဖော်ပြထား
Reality Stone – အနီရောင်ဒီကျောက်တုံးကို Thor: The Dark World မှာ စတင်ပွဲထုတ်ခဲ့တာကြောင့် Thor နဲ့တွဲဖက်ဖော်ပြထား
Mind Stone – အဝါရောင် Mind Stone ကို Avengers: Age of Ultron မှာထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး သူ့ကိုကိုင်ဆောင်သူဖြစ်တဲ့ Vision နဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ပြထား
အဲဒီတော့ Infinity Stones တွေကို သူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ တွဲဖက်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတဲ့ယူဆချက်က မှန်သလိုလိုပါပဲ။ အဲဒါဆို Soul Stone ကရော..
Soul Stone ကို ဒီ Promo Art ထဲမှာ Iron Man နဲ့ကိုယ်စားပြုဖော်ပြထားပါတယ်။ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတွေးကြည့်ရမယ်ဆိုရင် Soul Stone က Iron Man နဲ့တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဆက်စပ်နေတယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်ကနေတွေးကြည့်ပြန်တော့လည်း Marvel က အခုအချိန်အထိ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ Soul Stone အကြောင်းကို ဒီလိုကြီးလွယ်လွယ်ကူကူ spoil လိုက်တော့မှာလား.. စဉ်းစားစရာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့်လည်းပဲ အချို့ fan တွေက Iron Man ဟာ MCU ရဲ့အရမ်း popular ဖြစ်တဲ့ဇာတ်ကောင်မို့လို့ poster ထဲမှာ မပါပါအောင် ထည့်ထားတာလို့ ယူဆနေကြပါတယ်။
ကဲ.. သင်တို့ရောဘယ်လိုထင်ကြပါသလဲ။ Soul Stone ကို Infinity War မှာမြင်ရမမြင်ရ.. Soul Stone က Iron Man နဲ့ သက်ဆိုင်မသက်ဆိုင်ဆိုတာတွေကိုသိရှိရဖို့ သိပ်မစောင့်ရတော့ပါဘူး။ Avengers: Infinity War ကို ဧပြီ ၂၇ ရက်နေ့ကျရင် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာစတင်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Infinity Stone Promo Art. from r/marvelstudios
Action & Adventure, Hollywood, Marvel, Science Fiction
Previous Post: ဆယ်ကျော်သက်တွေ ရဲ့ ဘဝကို အသေအချာ ထင်ဟပ်ပြသမယ့်ရုပ်ရှင် The Edge Of Seventeen
Next Post: Avengers: Infinity War ပြသရက်အရှေ့တိုး